Hamro Kantipur | युरोकपमा भिड्ने देशहरुले बाँड्नेछन् ५ अर्ब पुरस्कार कस्लाई कति ? युरोकपमा भिड्ने देशहरुले बाँड्नेछन् ५ अर्ब पुरस्कार कस्लाई कति ?
युरोकपमा भिड्ने देशहरुले बाँड्नेछन् ५ अर्ब पुरस्कार कस्लाई कति ?
काठमाडौं, १३ असार । युरोकप फुटबलको भिडन्त जति चाखलाग्दो छ त्यसमा हुने खर्च पनि रोचक छ । प्रतियोगितामा सहभागी २४ टोलीले छनोट भएलगत्तै ठूलो धनराशी पाउँछन् । हरेक जीत या बराबरीमा नगद पुरस्कार पाउँछन् । हारमा भने रकम पाउँदैनन् । अन्तिम १६, क्वाटरफाइनल, सेमिफाइनल र फाइनलमा पाउने नगद राशी ठूलो छ ।
युरोकपको पुरस्कार राशी ३ करोड ७० लाख युरो रहेको छ । यो ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । २४ टोली युरोकपमा छनोट भएलगत्तै नगद पुरस्कारका हकदार भइसके । छनोट भएको प्रत्येक देशले २० लाख युरो अर्थात् २ करोड ४१ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार पाउँछन् ।
समूह चरणमा प्रत्येक खेल जित्दा पनि नगद पुरस्कार पाए । समूह चरणमा जीत्ने टोलीले १० लाख यूरो अर्थात् झण्डै १५ करोड नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्यो । बराबरीमा त्यसको आधा अर्थात् साँढे ७ करोड प्राप्त गरे ।
अन्तिम १६ मा पुग्ने प्रत्येक टोलीले १५ लाख युरो अर्थात् २० करोड नेपाली रुपैयाँ पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गर्दछन् । क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्ने प्रत्येक टोलीले ४० लाख यूरो अर्थात् ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको नगद पाउँछन् ।
युरो कपको सेमिफाइनलमा पुग्ने देशले नगद पुरस्कार पाउँछन् । उपविजेताले ७० लाख युरो अर्थात् ८६ करोड प्राप्त गर्छन् ।
युरो कपको विजेताले १ करोड युरो पाउँछ । यो १ अर्ब ४१ करोड नेपाली रुपैयाँ हुनआउँछ । कुल पुरस्कार राशीको २६ प्रतिशत रकम विजेताले नै लान्छ । उपविजेताले २० प्रतिशत रकम लान्छ । विजेता र उपविजेताले नै कुल पुरस्कार राशीको झण्डै आधा लान्छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीपूर्व पुरस्कार रकम ४० करोड १० लाख यूरो बनाइएकोमा पछि ४ करोड युरो घटाइएको थियो ।
युरो कपमा पाउने रकम (नेरुमा)
छनोट हुनेले पाउने रकमः २ करोड ८० लाख
समूह चरणमा प्रत्येक जीतः १४ करोड
समूह चरणमा बराबरीः ७ करोड
अन्तिम १६ मा पुगेको टोलीः २० करोड
क्वाटरफाइनलमा पुगेको टोलीः ५६ करोड
सेमिफाइनलमा पुगेको टोलीः ८६ करोड
उपविजेताः १ अर्ब
विजेताः १ अर्ब ४१ करोड रकम पाउनेछन् ।